BBC News Somali - Download Facebook Videos - GenFK.com
Laanta Af-Soomaaliga ee BBC waxaa laga yaabaa in ra'yiga aad halkan ku qorto ay u isticmaasho Radio ama www.bbcsomali.com ama labadaba. BBC Somali ma oggola in wax aflagaado ah ama cid lagu bahdilayo lagu qoro boggan.
BBC Somali waxa ay ku shaqeysaa dhexdhexaadnimo.
FB URL: https://www.facebook.com/BBCNewsSomali/
Magaalada Muqdisho waxaa xalay lagu laayay xubno ka wada tirsan hal qoys ka dib markii dabley aan heybtooda la aqoon ay weerar ku qaadeen guri ku yaala degmada Wada jir. Xildhibnaan Cabdullaahi Cumar Abshirow oo ah wasiir ku xigeenka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka Badda waxa uu ka tirsan yahay qoyska la weeraray, waxa uuna isaga oo jooga dalka Turkiga aan goor dhaweyd la hadlay BBC-da..
Dadka Deegaanka Booraale oo horey uga mid ahaan jirey maamulka Oromada, balse hadda kusoo laabtay kan Soomaaliya ayaa deyro ka muujiyay maamulka ay hadda kusoo biireen, waxaana BBC-da la hadlay Badel Aw Aadan Cabdullaahi.
Madaxweynihii ismaamulka orormmada oo loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga ee Itoobiya, warbixintan oo intan ka faahfaahsan kaga bogo lifaaqan https://www.bbc.com/somali/war-47972365
Waraysi ay BBC la yeelatay Cabdullaahi Dool oo ka mid ah saraakiisha wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo jagadii uu hayey looga qaaday baaq uu bartiisa twitterka ku qoray in Soomaaliya ay xiriir diblomaasiyadeed la yeelato Israa'iil.
Haweenaydan oo kasoo jeedda qoowmiyadda dadka asal-dhaladka ah (dadka loogu tagay) ee Australia ayaa loo xirey ganaax ay bixin weysay oo ku saabsan eeygeeda oo aysan diiwaangalinin. Dhacdooyin badan oo kuwan la mid ah ayaana jira.
Dumarka Afghanistaan oo doonaya in ay dhinac ka fariistaan miiska wadahadalada lala leeyahay ururka Dhaalibaan.
Madaxwaynaha Somaliland ayaa booqday goobta taariikhiga ah ee Laasgeel. Waxaana uu ka hadlay muhiimadda ay goobaha caynkan oo kale ahi leeyihiin. Fikirkaaga ka dhiibo.
Qalabkan waxa uu kuu sheegi karaa xanuunka ku haya dhaqtar la'aan.
Dhismihii gubtay ee Paris waxa uu ka badbaaday wixii dagaalo diimeed, siyaasadeed iyo kuwii dunida ee waaweynaa ee soo maray Faransiiska qarniyadii lasoo dhaafay, balse hadda ....
Warshadda Shidaalka Somaliland
Daraawiishtii oo xus loogu dhigay Laascaano, Prof Maxamed Cabdiqaadir ayaa BBC-da u waramay.